Ifulethi lika-Annie - I-Airbnb
Mount Gambier, South Australia, i-Australia
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Margaret
U-Margaret Ungumbungazi ovelele
I-Annie's Apartment isanda kulungiswa ngokuphelele, okuhlanganisa ukufudumeza okungaphansi kwendlu yangasese nendlu yangasese. Iseduze neMarket Place Shopping Centre, iMt. Gambier Hospital, CBD & Sporting Facilities. Sifuna ukhululeke futhi uzizwe usekhaya ngesikhathi sokuhlala kwakho. Ukuzingena Okufanelekile. Indawo yokupaka engaphandle komgwaqo iyatholakala eduze kwefulethi. I-Wireless NBN yamahhala. Asizwani nezilwane ezifuywayo
Sizamile ukwenza i-Annie's Apartment ibe yikhaya kude nasekhaya. Sifuna uzizwe ukhululekile futhi ube nemfihlo ngesikhathi uhlala . Sizama ukuphendula izingcingo noma imibuzo ngokushesha esingakwenza .Ikhishi lihlome ngezinto eziyisisekelo zokupheka . Indawo yokuhlala enohlelo oluvulekile inamasofa esikhumba amasha amnyama kanye ne-AC nefeni yosilingi ehlehlayo , idlulele endaweni yasekhishini enohhavini kagesi namapuleti ashisayo , indawo yokudlela izihlalo ezingu-4 .Ikamelo lokulala elikhulu line-TV, i-Mini Jumbuck woolen underlay over. umatilasi we-queen pillow top, ingubo kagesi kanye nefan yosilingi elawula kude. I-Bedroom 2 ine-pillow top Mattress ensemble entsha ethengwe ngo-December 2020 .Ilondolo elihlome ngokuphelele kanye nolayini wokomisa ngaphandle - owalabo abahlala nathi isikhathi eside. Asinayo iTumble Dryer, kuneLaundromat eqhele ngamamitha ayi-100 ukusuka eApartment ekhoneni likaWireless Road noPenola Road. Kunomshini womoya wezingubo egaraji . Sinamanoveli namamagazini kanye neminye imidlalo yamakhadi ezokugcina umatasatasa . Siphinde futhi sinikeze ulwazi lwendawo yezokuvakasha , amamephu , ukuthatha amamenyu njll. Uma ufuna ukuhlalisa iqembu elikhulu labantu zama ukubheka enye indawo yethu yokulala engu-2 endaweni efanayo -I-Rosa’s Apartment. Ukuhlanganisa i-Annie's and Rosa's Apartments mhlawumbe kuhle uma unamaqembu amabili ahamba ndawonye .Silandele ku-Instagram. Rosaandannie
4.95 out of 5 stars from 180 reviews
4.95 · 180 okushiwo abanye
Ifulethi liseduze nomgwaqo omkhulu osuka e-Adelaide futhi ngaphezu kwekhilomitha nje le-CBD. Inxanxathela yezitolo i-Marketplace ine-Woolworths, inkundla yokudla, igalaji likaphethiloli nezinye izitolo ezidayisayo isendaweni engaphansi kwekhilomitha.
Ngivame ukutholakala ngocingo ngesikhathi esifushane. Ngithanda ukuzwa ukuthi indawo ingeyami uma ngihamba, ngakho nginikeza izivakashi zami indawo nobumfihlo - ngolwazi lokuthi ngingathintwa nganoma yimiphi imibuzo ngeselula. Ukuzihlola kunikeza izivakashi ukufinyelela ngokushesha efulethini lapho zifika endaweni.
Ngivame ukutholakala ngocingo ngesikhathi esifushane. Ngithanda ukuzwa ukuthi indawo ingeyami uma ngihamba, ngakho nginikeza izivakashi zami indawo nobumfihlo - ngolwazi lokuthi ng…
UMargaret Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Mount Gambier namaphethelo